Artificial Intelligence vs Machine Kudzidza vs Dhata Sayenzi - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
chakagadzirwa Intelligence, Data Science, Machine Learning
Mazuva ano matekinoroji senge chakagadzirwa njere, machine learning, data science uye big data ave mashoko anotaurwa nemunhu wese asi hapana anonzwisisa zvizere. Vanoita sevakaoma kunzwisisa kumunhuwo zvake. Ese aya ma buzzwords anonzwika akafanana nemukuru webhizinesi kana mudzidzi kubva kune asiri-tekinoroji kumashure. Vanhu vanowanzo vhiringika nemashoko akaita seAI, ML uye data science. Mune ino blog, tinotsanangura matekinoroji aya nemazwi akareruka kuitira kuti unzwisise zviri nyore mutsauko uripo pakati pawo uye mashandisirwo ari kuitwa mubhizinesi.
Chii chinonzi Artificial Intelligence (AI)?
chakagadzirwa njere zvinoreva kutevedzera kwehuropi hwemunhu mashandiro nemachina. Izvi zvinoitwa nekugadzira chakagadzirwa neural network iyo inogona kuratidza huchenjeri hwevanhu. Iwo ekutanga mabasa emunhu anoitwa nemuchina weAI anosanganisira kufunga zvine musoro, kudzidza uye kuzvigadzirisa. chakagadzirwa njere munda wakapamhama unemashandisirwo mazhinji asi iri zvakare imwe yehunyanzvi hwakaomesesa kushanda pairi. Mashini zviripo hazvina kuchenjera uye kuzviita zvakadaro, tinoda yakawanda yemagetsi simba nedata kuvapa simba kuti vateedzere kufunga kwevanhu.
chakagadzirwa njere inoiswa muzvikamu zviviri, zvakajairika chakagadzirwa Intelligence uye Narrow chakagadzirwa Intelligence. General AI inoreva kugadzira michina ine hungwaru muhuwandu hwakawanda hwezviitiko zvinosanganisira kufunga uye kufunga. Narrow AI, kune rumwe rutivi, inosanganisira kushandiswa kwe chakagadzirwa njere kune rimwe basa chairo. Semuyenzaniso, general AI yaizoreva algorithm inokwanisa kutamba marudzi ese ebhodhi mutambo ukuwo nhete AI ichidzikamisa huwandu hwemakina ekugona kumutambo wakaita sechess kana scrabble. Parizvino, chete nhete AI iri mukati mekusvika Developers nevatsvakurudzi. General AI chingori chiroto chevaongorori uye maonero pakati pechaunga izvo zvichatora nguva yakawanda kuti rudzi rwevanhu rubudirire. (kana zvichibvira).
Read More: Mashandisiro Ekushandisa IoT neAI yekuvandudza Kugutsikana Kwevatengi?
Chii chinonzi Machine Kudzidza?
Machine Learning . Machine pakudzidza inotarisa mukugonesa algorithms kuti adzidze kubva kune data rakapihwa, kuunganidza zviono uye kuita fungidziro pane yaimbove isina kuongororwa mitezo uchishandisa ruzivo rwakaunganidzwa. Machine pakudzidza inogona kuitwa uchishandisa nzira dzakawanda. Iwo matatu ekutanga mamodheru e machine learning inotariswa, isingatariswe uye yekusimbisa kudzidza.
Mukana wekudzidza unotarisirwa, yakanyorwa data inoshandiswa kubatsira michina kuziva hunhu uye kuishandisa iyo data remangwana. Semuenzaniso, kana iwe uchida kupatsanura mifananidzo yekitsi nembwa iwe unogona kufudza iyo data yemashoma akanyorwa mifananidzo uye ipapo muchina unorongedza ese asara mifananidzo ako. Kune rimwe divi, mukufunda kusingatarisirwe, isu tinongoisa isina zvinyorwa zvinyorwa uye rega muchina unzwisise hunhu uye wozvimisikidza. Kusimbisa machine learning algorithms inowirirana nenharaunda nekugadzira zviito uye woongorora zvikanganiso kana mibairo. Semuenzaniso, kuti unzwisise mutambo wechess iyo ML algorithm haizoongorora imwe nhanho inofamba asi ichadzidza mutambo wacho seyakazara.
Read More: Inotsanangurwa vs. Predictive vs. Prescriptive Analytics
Chii chinonzi data Science?
Data yesayenzi ndiko kutorwa kweruzivo rwakakodzera kubva kumaseti e data. Inoshandisa matekiniki akasiyana kubva kuminda yakawanda semasvomhu, machine learning, hurongwa hwekombuta, kuenzanisa nhamba, data engineering uye kuona, kucherechedzwa kwepateni uye kudzidza, kusavimbika modhi, kuchengetedza data, uye gore kadambari. Data Science hazvireve kuti zvinosanganisira data hombe, asi chokwadi chekuti data iri kuwedzera inoita kuti data hombe ive chinhu chakakosha data science.
Data yesayenzi ndiyo inonyanya kushandiswa data inofambiswa nzira pakati peAI, ML uye pachayo. Varapi ve data science vanowanzo hunyanzvi mumasvomhu, nhamba, uye kuronga (kunyangwe hunyanzvi mune zvese zvitatu hazvidiwe). Dhata masayendisiti anogadzirisa matambudziko akaomarara edhata kuburitsa mapatani mune data, nzwisiso uye kuwirirana kunoenderana nebhizinesi.
Read More: R vs Python yeData Sayenzi
Musiyano uripo pakati peArtificial Intelligence, Machine Kudzidza uye Dhata Sayenzi:
chakagadzirwa njere ishoko rakapamhama kwazvo rine maapplication kubva kurobhoti kusvika pakuongorora zvinyorwa. Iyo ichiri tekinoroji pasi pekushanduka-shanduka uye pane nharo dzekuti isu tinofanirwa kuve tichitsvaga yakakwira-chikamu AI kana kwete. Machine pakudzidza chikamu cheAI chinotarisa pane nhete yezviitiko. Kutaura zvazviri, ndiyo chete yechokwadi chakagadzirwa njere nemamwe maapplication mumatambudziko epasirese.
Data yesayenzi haisi iyo chaiyo subset ye machine learning asi inoshandisa ML kuongorora data uye kufanotaura nezveramangwana. Inobatanidza machine learning nezvimwe zvidzidzo zvakadai guru data analytics uye gore kadambari. Data yesayenzi kushandiswa kunoshanda kwe machine learning nekutarisa kwakazara pakugadzirisa matambudziko epasirese.
At NewGenApps, isu tinotarisa mukuvandudza mitsva zera mhinduro dzinowedzera aya matekinoroji uye dzinokubatsira iwe kugadzirisa chaicho-bhizinesi renyika matambudziko. Kana iwe uchitsvaga kambani inogona kuita zvine musoro kubva kune yako data uye inokupa iwe ruzivo rwakakosha kune rako bhizinesi saka inzwa wakasununguka kuti utaure.